Donald Payne oo diiday in uu la kulmo Wasiirka Arrimaha Dibedda Somaliland | Somaliland.Org
Donald Payne oo diiday in uu la kulmo Wasiirka Arrimaha Dibedda Somaliland
July 29, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Gudoomiyaha guddi-hoosaadka arrimaha dibedda ee Wakiilada Maraykanka Mr. Donald Payne ayaa la sheegay in uu ka cudur-daartay in uu la kulmo Weftii Wasiirka Arrimaha Dibedda Somaliland Cabdilaahi Maxamed Ducaale oo socdaal shaqo labadii toddobaad ee u dambeeyay ku joogay Maraykanka.
Sida aanu ka soo xiganay Laanta Afka Soomaaliga ee VOA oo Warkan baahisay, Gudoomiyaha guddi-hoosaadka arrimaha dibedda ee Wakiilada Maraykanka Mr. Donald Payne oo hore Wasiirka Arrimaha Dibedda Somaliland ugu marti-qaaday kulan xog-dhegaysi ah oo ay ka qayb-galeen Maamul-gobolleedka Puntland iyo Dawladda Shariif Sh. Axmed ee Soomaaliya, marti-qaadkaas oo Xukuumadda Somaliland ka cudur-daaratay, isla markaana ay sheegtay in aanay ka qayb-galayn oo ay ka baaqatay, ayaa la sheegay in uu diiday in uu aqbalo codsi uu u jeediyey Wasiirka Khaarajiga Somaliland Cabdilaahi Maxamed Ducaale oo uu kaga dalbaday in uu la kulmo. Warbixintan ay baahisay Idaacadda VOA ayaa lagu sheegay in Mr. Donald Payne uu sheegay in xitaa aanu mustaqbalka la kulmi doonin Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland Cabdilaahi Maxamed. “Arrinta ah sababta uu Mudanuhu ula kulmi waayay Weftiga waxay ila tahay jawaabta meesha ku habboon tahay in Wasiirku diiday inuu ka qayb-galo xog-dhegaysi rasmi ah oo khuseeya Soomaalida oo dhan.” Sidaa waxa VOA u sheegay mid ka mid ah Hawl-wadeenada ku xidhan Mr. Donald Payne oo ay wax ka waydiiyeen sababta uu ku diiday Guddoomiyuhu la kulanka Weftiga Somaliland. Waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Dad badani waxay rumeysan yihiin inay taasi (Shirkii Maraykanka) aheyd fursad ay Somaliland dayacday. Laakiin wuxuu ku celceliyey in Donald Payne, mudanaha Congress-ka, inuu u heellan yahay shacabka Somaliland. Guddoomiyihu wuxuu si cad ugu celceliyey sida ay uga go’an tahay inuu taageero shacabka Somaliland, iyo waliba inuu mustaqbalka la kulmi doono dad ka socda Somaliland, iyo waliba ku daneeya.”
Dhinaca kale, Wakiilka Somaliland ee Mareykanka Dr. Sacad Nuur ayaa sheegay in inkastoo ay xushmad iyo qaddarin u Donald Payne, haddana aanay marnaba yeeli doonin wixii ka hor imanay Qaranimada Somaliland. “Anagu Jamhuuriyad Somaliland ahaan jiritaanka Qarankayaga wixii ka horimanaya cidna kama aqbalno, inkasta oo aanan isaga arag oo hawl-wadeeno uu ka mid yahay ninka aad waraysateen (Ted Dagne) ay hawsha wadeen, haddana xishmad baanu u haynaa.” Ayuu yidhi Dr. Sacad Sh. Cismaan Nuur.
Wakiilka Somaliland ee Maraykanka mar la waydiiyay ujeedada socdaalka ee Wasiirka Khaarajigu ku tegay Maraykanka, ayaa wuxuu ku jawaabay. “Waxay Weftigu u yimaadeen shaqo caadi ah oo Wasaaradda Arrimaha Dibedda Somaliland samayso oo ku saabsan sidii loo adkayn lahaa xidhiidhka ka dhaxeeya Somaliland iyo dawladda Maraykanka.”
Dr. Sacad Warsaxaafadeed uu soo saaray shalay ayaa wuxuu ku sheegay in Weftiga Wasiirku ay kulamo la yeesheen Masuuliyiin sar-sare oo ka tirsan Maamulka Madaxweyne Obama ee Maraykanka, kuwaas oo ay ka mid yihiin La-taliyaha amuuraha Afrika ee Madaxweyne Obama, Kaaliyaha amuuraha Afrika ee Wasaaradda Arrimaha dibedda Mr. Johnnie Carson iyo sidoo kale Masuuliyiin sarsare oo ka tirsan Wasaaradda Difaaca. Waxaana la sheegay inay ka wada-hadleen arrimaha Xag-jirnimada Diinta, Argagixisada iyo Budhcad-Badeedda. Warsaxaafadeedkan waxa kale oo lagu sheegay in Weftigu la kulmay Masuuliyiin ka tirsan Hay’adda USAID, gaar ahaan, Maamule-xigeenka Hay’addaas iyo Shaqaale-hoosaadka u qaabilsan bariga Afrika iyo Agaasimaha qorshaynta ee Baanka Dunida.